गुल्मीमा कार्यरत प्रहरी जवान जसले पुरै तलव समाजसेवामा खर्चिन्छ – Gulmiews
गुल्मीमा कार्यरत प्रहरी जवान जसले पुरै तलव समाजसेवामा खर्चिन्छ
२६ श्रावण २०७२, मंगलवार १७:५४ Sanju Kauchha
रोचक प्रसंग, समाचार
गुल्मी, साउन २६ । उनको उमेर २८ वर्ष भयो । उनि अविवाहित हुन् र जिवन भर स्त्री जाति संग टाढा रहेर एक मात्र सन्त प्रहरी बनेर संसारमा आफुलाई चिनाउने उनले प्रण गरेका छन् । जागिर १२ वर्षमा टेक्यो तर १२ वर्षको तलवबाट १२ सय रुपैयाँ पनि घरमा नदिएको उनि बताउँछन् । उनले घरमा एक पैसा नदिने गरेको कुरा उनले समाज सेवामा खर्चिएको रकमले पनि पुष्टी गर्दछ । शिक्षा , स्वास्थ्य, गरिव असाहय, बृद्ध, बृद्धा, धार्मिक क्षेत्र,पर्यटन विकास , कला र खेलकुद क्षेत्रमा उनले जहाँ कार्यरत रह्यो त्यही खर्चेका छन् । उनि हुन हालै गुल्मीबाट सरुवा भई कपिलवस्तको सुन्दरीडाँडा ईलाका प्रहरी कार्यालय पुगेका प्रहरी जवान दिपक थापा । २०४२ साल मंसिर ७ गते वुटवल उप–महानगर पालिका–१६, पदमपुर स्थित पिता लिलबहादुर थापा र मात गणेशकुमारी थापाको कोखबाट जन्मिएका उनि वाल्यपन देखि नै अध्यात्मिक रहेको बताउँ छन् ।
भारतको हरिद्धारमा वाल्यपन देखि अध्यात्मिक ज्ञान हाँसिल गरेको बताउने थापाको औपचारिक शिक्षा आईए पास रहेको छ । उनी प्राकृतिक योग शिक्षा शास्त्रमा डिप्लोमा दोश्रो वर्षमा समेत अध्यानरत छन् । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा रहँदा प्रथम गुल्मी महोत्सवलाई २० हजार चन्दा दिए । पर्यटन वर्ष २०११ मनाउनका लागि १० हजार दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको भवन निर्माणका लागि १० हजार उपलव्ध गराए । गायन प्रतिभा छनौटका लागि आयोजना गरिएको प्रथम गुल्मी ताराका लागि ५ हजार, दोश्रोका लागि ३ हजार र तेश्रोका लागि २ हजार पुरस्कार शौजन्य पनि गरे उनले ।
जिल्ला अस्पतालमा डिउटी दिईएका उनले त्यहाँका विरामी जो संग आर्थिक अभाव थियो उनिहरुलाई रकम दिएर औषधी उपचारमा सघाए । पाल्पा रिफर गरे पछि बाटो खर्चको अभावमा घर फर्किन थालेकाहरुलाई पाल्पा पठाए । त्यस पछि उनलाई गुल्मीकै नयाँगाउँ प्रहरी चौकीमा सरुवा गरियो । त्यहाँ पुगे पछि रकम अभावमा अलपत्र त्यस चौकी प्रङ्गाणको मन्दिरमा ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ खर्चेर सम्पन्न गरे । त्यस चौकीमा डिसहोम केवुल जडान गरे ५ हजारमा । त्यस्तै त्यहाँकोे पाटी–पौवा निर्माणमा हजारौं रुपैयाँ खर्चिए थापाले । नयाँगाउँ उच्च माध्यामिक विद्यालय विकासका लागि २५ हजार सहयोग गरे ।
सोही विद्यालयमा आफ्नै नाममा १० हजारको दिपक थापा अनुशासन वर्ष पुरस्कारको स्थापना पनि गरी दिएका छन् उनले । गणेश माध्यामिक विद्यालय पिपलधारामा ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरी दिए । त्यति नै धनराशीको अक्षय कोष पिपलधाराकै ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, सोमरभोमर माध्यामिक विद्यालय हाडहाडे र छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको खनदह उच्च माध्यामिक विद्यालयलाई पनि कोष स्थापना गरी दिएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले नयाँगाउँमा एम्वुेन्स सेवा सञ्चालनका लागि २० हजार दिएका छन भने आगमी दिनमा त्यसमा ५० हजार सहयोग पुराउने सोचेका छन् । पिपलधारामा एम्वुलेन्स सञ्चालनका लागि १५ हजार ५१ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यसका अलवा आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन नसकेका र भोका नाङ्गाहरुलाई गरेको आर्थिक सहयोगको विवरण त लेखि साध्य छैन ।
गत बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट पिडित बनेका देशभरका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न प्रहरी जवान थापाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डेढ लाख रुपैयाँ पठाए । त्यस्तै काठमाण्डौंमा रहेको तिन वटा बृद्धा आश्रमका बृद्ध बृद्धाहरुलाई प्रहरी जवान थापाले तिन लाख सहयोग गरे । ‘१२ वर्ष जागिर भयो पाएको तलवबाट आफुले साधरण सिभिल डे«श, वुट पोलिस लगायतको नित्यकर्ममा खर्च गर्छु ’–प्रहरी जवान थापाले भने–‘ बचेको सवै सामाजिक क्षेत्रमा खर्चेको छु ।’
घर खर्च कसरी चलाउ छ त परिवारले ? भन्ने प्रश्नमा थापाले भने –‘वुवाले २० वर्ष सम्म भारतमा बैंकको जागिर खानु हुन्थ्यो । त्यसको पेन्सन आउछ । पाँच तले पक्की घर छ । तिन वटा तलामा रहेका कोठाहरु भडामा दिएका छौं । जमिन पनि अरुलाई गर्न दिन्छौं र त्यसबाट सजिलै घर खर्च चलेको छ । म घरको एक मात्र सन्तान हुँ । वाल व्रम्हाचारी भएकोले मेरो भोलीको सन्ततीका वारेमा सोच्ने कुरा पनि भएन् ।’ २०६१ साल पौष ५ गते वुटवल तालिम केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका उनि तालिम सकेर लुम्विनी अञ्चल अस्पतालमा खटिए ।
लगत्तै त्यसै तालिम केन्द्रमा आए । त्यस पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा ५ वर्ष सम्म वसे । त्यहाँ छँदा जिल्ला अस्पतालमा खटिए । त्यस असपतालले स्वास्थ्य विभागबाट प्रहरी जवान थापालाई ‘महापुरुष’ को उपाधीको प्रमाण पत्र सहित सम्मान ग¥यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले पनि गत वर्ष उत्कृष्ट कार्य गरे वापत उनलाई पुरस्कृत गरेको थियो । उनले माछा –मासु , मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ केहि खाँदैनन् ।
सामन्य पहिरनमा हिड्ने, नियमित मन्दिरमा पुजा गर्ने र रातो टिका लागाउने गर्दछन उनले । बढि मात्रमा उनी अङ्ग रक्षक, कार्यालय व्यवस्थापनको काम र स्वास्थ्य क्षेत्रको डिउँटीमा अनुभवी छन् । उनी प्रहरी भित्रको विकृति विसंगती अन्त्य गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको बताउँ छन् । ‘भ्रष्टचार त प्रहरीमा मात्र होईन जताततै छ । त्यसको अन्त्य गर्न त न सकुँला तर प्रहरी जहाँ पुग्यो त्यही श्रीमति बनाउने विकृतिका विरुद्ध जन चेतना छर्ने प्रयासमा जुटेको छु’– थापाले भने –‘७५ जिल्लामा पुगेको प्रहरीका ७६ वटा श्रीमति हुने कुरा जो रक्षक उहि भक्षक भने जस्तै हो त्यसको अन्त्य हुनै पर्छ ।’ उनले जव सम्म प्रहरीमा रहन्छु तव सम्म पाएको तलव समाज सेवामैं लागाउँछु भनेका छन् ।
जनताको करवाट पाएको तलव जनतालाई नै फर्काउने म नै एक मात्र प्रहरी हुँ भनेर विश्वलाई चिनाउनु छ मैले ’– थापाले भने–‘ जन्मेर यो धर्तिमा आई सके पछि आफु मात्र होईन सवै जना मिलेर बाँढेर बाँचौ भन्ने भावनाको विकास हुन सके न देशमा भ्रष्टचार हुन्छ न कुनै कुरामा लडाई झगडा नै ।’ ‘मैले पाएको तलव घरमा नलगेर समाज सेवामा लगाएर पनि भएकै छ भने म जस्तै जागिरेहरुले त्यही तलवले जति पुग्छ त्यतिले घर चलाउन सक्ने हो भने किन लोभ–लालच र भ्रष्टचार गर्नु पर्दथ्यो ?–उनले यस्तो प्रति प्रश्न गरे ।
स्कुले जिवन देखि अहिले प्रहरीको १२ वर्षे अवधी सम्म तपाईलाई कुनै युवतीले प्रेम प्रस्ताव राखेका छैनन् भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो मन सकरात्मक भएकोले अहिले सम्म कसैले प्रस्ताव नगरेको बताए । कतै संसारकी सवै भन्दा सुन्दरीले तपाईको सन्तत्वलाई भङ्ग गरी दिने त होईनन् कुनै दिन ? भन्ने प्रश्नमा उनले संसारमा आफ्नो सन्तत्वलाई भंङ्ग गरी दिन सक्ने कुनै सुन्दरी नजन्मेको र यदि कोही जन्मेको भए भङ्ग गरेर देखाउन चुनौती दिए । कुन त एक मात्र सन्तान त्यही पनि सन्त बनेर गृहस्थी जिवन नजिए पछि तपाईहरुकोत बंशजले निरन्तरता नपाउने भयो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफुलाई त्यसको चिन्ता नभएको बताए । वावु आमालाई पहिला त्यसको चिन्ता थियो तर पछि समाज सेवामा मैले गरेको काम र मेरो शुद्ध व्यवहार देखेर उहाँहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र घर खर्चबाट बचेको पैसाबाट उहाँहरुले पनि मैले जस्तै समाज सेवा गर्नु हुन्छ’– थापाले भने ।
यस सम्वन्धमा निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद पौड्याल संग सम्र्पक राख्दा प्रहरी जवान थापाले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय भएको बताए । अनौठौ खालको स्वभाव भएको प्रहरी हुन उनि पौड्यालले भने उनको विषय उठाउँदा राम्रै हुन्छ । उनि सोमवार सुरुवा भई जाँदा त्यस नयाँगाउ, पिपलधाराका संघ संस्थाहरुले सम्मान सहित विदाई गरेका थिए । यसरी जनसमुदायबाट भव्य औपचारिक कार्यक्रम गरेर विदाई हुने थापा पहिलो प्रहरी जवान पनि हुन् । उनको जिवन कथा फिल्ममा उतार्ने सोच बनाएका फिल्मकर्मी सुमन पाण्डेले यस्ता खालका प्रहरी जवान नेपालमा मात्र होईन विश्वमै हुन नसक्ने बताए । ‘अरुले आफ्नो र परिवारका लागि जागिर खान्छन तर प्रहरी जवान थापाले अरुको सेवाका लागि प्रहरीको जागिर खाई रहेका छन’–पाण्डेले भने–‘ उनरको अनुशरण अरुले गर्न सके यो देशमा भ्रष्टचार हुने नै थिएन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने सवैले सञ्सारमैं अनौठो स्वभाव र उदाहरणीय समाज सेवी भएको बताउने गरेका छन्।
प्रहरी जवान थापाको यस जिवन कथाका मुख्य अंश जनताले तिरेको करबाट खाएको तलव जनतालाई नै फर्काउने सम्भवत नेपालमैं पहिलो प्रहरी । बाँचुञ्जेल अरुको केहि नखाने आफ्नो अरुलाई खुवाउने । एक मात्र सन्त प्रहरीका रुपमा संसारलाई चिनाउने प्रण । ७५ जिल्लामा पुगेको प्रहरीले ७६ वटा श्रीमति बनाउने विकृतिको अन्त्य गर्न प्रहरीमा प्रवेश गरेको भनाई । आफ्नो मन पगालेर वाल व्रम्हचारीत्व भंग गर्न सक्ने कुनै सुन्दरी संसारमा नजन्मेको, यदि कोही सुन्दरी जन्मेको भए भङ्ग गरेर देखाउन चुर्नौती…………………..